Top 5 Kasị Ihunanya Train Journeys Na Europe | Save A Train
Home > ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ > Top 5 Kasị Ihunanya Train Journeys Na Europe
Top 5 Kasị Ihunanya Train Journeys Na Europe
site Niamh Waters 13/02/2018
ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ 2
Ma ị lụrụ maka afọ, ma ọ bụ ka nọ n'oge n'ụzọ nke a mmekọrịta, ọ bụla di na nwunye nwere ike irite uru àgwà oge nọrọ ọnụ. Ọ bụ karịsịa mma na-eme ka mgbalị maka Ɛpo Day. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ n'ụzọ zuru okè na-amalite a ihunanya na honiimuunu getaway na onye ị hụrụ n'anya. Adị nwayọọ site obodo ma ọ bụ n'elu ugwu. Agazu gara aga maa mma, oge ochie obodo ma ọ bụ ndị nke ụsọ a ice ọdọ. Ebe a na- n'elu 5 kasị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Europe. Onye ọ bụla na-enye ihe pụrụ iche maka Ɛpo Day.
London ka Venice is our First Romantic Train Journeys
Nke a ụgbọ okporo ígwè na njem ga-eme ka ị na onye ị hụrụ n'anya site lush obodo. Mgbe ahụ ị ga-tụgharịa gara aga nwere ugwu nke Switzerland na Austria. Osote, ị ga-enwe ihe ndị kasị mma mma nke Verona site okporo ígwè tupu ị na-ruo bịara n'ikperé mmiri nke Venetian Grand Canal.
Paris na Nice, France
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. Si-acha odo odo lavender ubi Cote d'Azur-acha anụnụ anụnụ mmiri. Iju na ụzọ nke ọlaedo ìhè anyanwụ magically immerses ya niile, na na maka a na-emeso. Malite na ndị kasị ihunanya obodo niile, Paris, gị tren njem ga-agafe dreamy coastlines nke ịrịba ama osimiri. Ị ga-ahụ ọmarịcha obodo nta na sunflower na lavender ubi nke Provence.
Lyon na Nice Ụgbọ oloko
Paris na Nice Ụgbọ oloko
Avignon na Nice Ụgbọ oloko
Marseilles na Nice Ụgbọ oloko
Florence ka Rome, Italy
Erite ọtụtụ puku afọ nke omenala na abụọ iconic Italian bara nnukwu uru, nile na otu ihunanya njem. Lee masterpieces na Tuscan nri pụrụ iche nke Florence. Ọzọkwa, gaa na okpueze ọla nke Rome, The Vatican. Olee ihe pụrụ ịdị mma?
You and your loved one can travel by train between two wonderful cities as the magnificent Italian countryside unfolds past your carriage window. Nke a na-bụ otu n'ime ndị kasị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Europe.
Venice ka Rome Ụgbọ oloko
Levanto ka La Spezia – n'elu 5 kasị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Europe
Nke a obere ngalaba nke ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ise Italian Riviera villages of the Cinque Terre n'uzo di itunanya. The ụgbọ okporo ígwè njem bụ ihe na-erughị otu awa ọ bụla ụzọ, n'ihi ya, ụgbọ okporo ígwè ahụ otu ụzọ. Mgbe ahụ ị pụrụ imefu ụbọchị hiking ịtụnanya obodo-ejikọta ụzọ ụkwụ azụ ebe ị malitere. Nke a ụgbọ okporo ígwè na njem bụ n'ezie ikpọ na echiche nke Ligurian Sea, pastel obodo nta, ogologo ubi vaịn nakwa dị ka vibrant ubi.
Milan ka Levanto Ụgbọ oloko
Milan ka La Spezia Ụgbọ oloko
Siena ka La Spezia Ụgbọ oloko
Siena ka Levanto Ụgbọ oloko
Zurich na Innsbruck
Amalite gị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem Zurich. Gị Bahnhofstrasse, otu n'ime ndị kasị mara mma shopping n'okporo ámá n'ụwa, na ịzụta a memento. Iju na ahụ kwesịrị ịrịba ama ọrụ nke Van Gogh na Monet na nke ukwuu-hụrụ n'anya Kunsthaus art gallery. E nwere ọtụtụ ihe di na nwunye na-eme na Zurich tupu snuggling n'ime sinik ụgbọ okporo ígwè na Innsbruck. Njem tinyere bịara n'ikperé mmiri nke Lake Zurich kwupụta ịrịba ama Alpine mma. Ị ga-agabiga ọmarịcha ugwu ala ahịhịa juru na ebube vistas. Gịnị nwere ike ịbụ ihe ihunanya?
Zurich na Innsbruck Ụgbọ oloko
Salzburg na Innsbruck Ụgbọ oloko
Vienna na Innsbruck Ụgbọ oloko
Cologne na Innsbruck Ụgbọ oloko
Na-eche echiche nke na-ewere a ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na onye ị hụrụ n'anya? gaa Save A Train lelee niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-5-romantic-train-journeys-europe/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#romance London ihunanya romanticdestinations travelflorence travelnice travelparis travelrome travelvenice
I am hard working and passionate individual with many years of experience in all things digital marketing and public relations. Over the last number of years, I have grown my skills in the area of travel as well and therefore started writing content so people can enjoy our world as much as I do. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe 0
Mere I Kwesịrị tụlee ịzụta Cheap gbaa ụgbọ okporo ígwè Europe?
Ịnụ Ụtọ A ikpe ọmụma-Free Njem: mbikọ Ulo
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Dec 2019Jan 2020Feb 2020Mar 2020Apr 2020Ka 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020
Ndenye Guide: Olee otú Iji Travel Cinque Terre Site Train
5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium
5 Best Natural Hot Springs Na Europe
ụgbọ ala njem Atụmatụ
Train njem Austria
Train njem Belgium
Train njem Britain
Train njem Bulgaria
Train njem Denmark
Train njem Finland
Train njem France
Train njem Germany
Train njem Hungary
Train njem Italy
Train njem Luxembourg
Train njem Norway
Train njem Portugal
Train njem Scotland
Train njem Spain
Train njem Sweden
Train njem Switzerland
ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ
Train njem Turkey
Train njem UK
WordPress Okwu wuru Shufflehound. Copyright © 2019 - Save A Train, Amsterdam, Netherlands
Biko dejupụta niile chọrọ ubi.